ဗဟုသုတများ - ThutaStar
ကြွက်တွေပေါနေရင် ကြွက်ပြေးသော ဒါဏ်ကြေလိမ်းဆေး
September 21, 2019 Thuta Star 0
ကြွက်ပြေးသော လင်ဇီးဒါဏ်ကြေလိမ်းဆေး ကြွက်တွေက ပေါလိုက်တာ့ ပေါတာမှ စာအုပ်တွေကိုက် အဝတ်တွေကိုက့် ညကျတော့ တစ်ဝုန်းဝုန်းနှင့်လိုက်တမ်းပြေးတမ်းကစားကြ့့ ကျိန်းမရအောင်ဖြစ့်် တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင်လှမ်းအော်ကြ့ တစ်ခါတလေများဆို ပြေးရင်းလွှားရင်းခြင်ထောင်အမိုးပေါ်ဒိုင်ဘင်ထိုးချ့့ လွန်တာမှအတော်လွန့်အဲ့ဒါနှင့်ကလေးတွေက ထောင်ချောက်ထောင်မယ်လျှောက်တယ့် မလုပ်နှင့် ဆေးကျွေးမယ်ဆိုိတယ့်လုံးဝမလုပ်နှင့်ပေါ့…. အဲ့ဒါနှင့်တစ်နေ့ကျတော လက်မောင်းအောင့််လို့လင်ဇီးဒါဏ်ကြေဆေးလိမ်းတယ့် ပူလိုက်တာ့.. အခိုးကလည်း မွှန်ပြီးမျက်ရည်ကျတယ့်် လူတောင်အနံ့ခိုးရတာနှင့်မျက်ရည်ကျရတယ် […]
“ဆင်တုပ်ကွေးက ချန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အဆစ်နာတွေကို သက်သာအောင်လုပ်နိုင်မယ့် အကောင်ဆုံးနည်းလမ်း..”
တုပ်ကွေးတို့ရဲ့ သဘာဝကိုက တစ်ကိုယ်လုံးကိုက်ခဲပြီး ဖျားတယ်၊ တုပ်ကွေးကွေးတယ်ပေါ့။ ပျောက်ပြီဆို အကုန်သက်သာသွားတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်ထားတာ သက်သာလားလို့ မေးလိုက်ရင် အဆစ်အမြစ်တွေနာနေတုန်း၊ ကိုက်ခဲနေတုန်းပဲ။ လမ်းလည်းသိပ်မလျှောက်နိုင်၊ ပစ္စည်းတွေတောင် လက်က မြဲအောင်မကိုင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ စကားတွေ ကြားရပါတယ်။ တကယ်တော့ လူကနေပြန်ကောင်းနေပါပြီ၊ ဒီဝေဒနာတွေက မပျောက်သေးဘူး ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့် အဖြစ်များတဲ့ […]
ရုတ်တရက် မြင်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းသိသွားနိုင်မယ့် အလျှံအပါယ် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူရဲ့ လက္ခဏာ ပုံစံ
မူရင်း လက်ဝါးပုံကိုပါ တစ်ခါတည်း တွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်သူကြွယ် အောက် အဖြူရောင်ဖြင့် ဝိုင်းပြသည့်ထဲကြည့်ပါက “ငါးရုပ်သင်္ကေတပုံ´´ထင်ရှားပြတ်သားစွာ မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ထို ငါးရုပ်သည် လက်ဝါးပြင်၌ မည်သည့်နေရာ၌ ရှိရှိ ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာကို ပေးပါတယ်။ အခုပုံ လက်သူကြွယ် အောက်ရှိငါးရုပ်သည် မှန်ဘီလူး ဖြင့် ကြည်စရာမလိုပဲ ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ […]
September 14, 2019 Thuta Star 0
မေမေတို့ရေ ခုလို ခြင်ယင်ပေါတဲ့ရာသီမှာ ကလေးတွေ ကျန်းကျန်းမာရေးတွက် စိုးရိမ်ရတယ်ဟုတ် ခြင်ဆေး ယင်ဆေးတွေကလဲ ဆိုးကျိုးများတယ်ဆိုတော့ သဘာဝနည်းလေးမျှဝေချင်လို့ပါ ကိုယ်လဲ သူများထမင်းဆိုင်မှာ စပ်စုရင်းသိလာတာလေးပါ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း စပါးလင်ပင်လေးတွေကို ထိပ်ဖြတ်ပြီး ထည့်ပေးထားရုံပါဘဲ ရေလေးတော့ လဲလဲပေးပေါ့ အပင်ထိပ်လေးတွေ ခြောက်သွားရင်လဲ အနံ့ထွက်ရုံလေးဖြတ်ဖြတ်ပေးပါ အကုန်အကျလဲသက်သာ ကိုယ်က […]
လွယ်ကူတဲ့နည်းဖြစ်လို့ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင် ခေါင်းကိုက်လျှင် ချင်းကပ်ပါ။ ခေါင်းကိုက်။နထင်ကိုက်။ဇက်ကြောတက်မျက်ရိုးကိုက။ အလုပ်တစ်ဘက်နှင့်ဆေးခန်းသွားဖို့အချိန်မပေးနိုင်လျှင် ချင်းတက်ကိုပါးပါးလှီးပြီးနထင်နှစ်ဘက်တွင်ကပ်ပေးပါ ။ ဇက်။ဂုတ်ကျီးပေါင်းရှိသူများ။ကျီးပေါင်းရင့်၍မူးသူ။ ဇက်ကိုခဲဆွဲကုသနေရသူများသည် ဇက်ရင်းကျီးပေါင်းဖုပေါ်တွင်ချင်းကိုပါးပါးလှီးပြီး ၄-၅ နေရာကပ်နိုင်ပါသည် ။ ချင်းတွင်အပူဓာတ်ရှိသည်။ အရောင်ကျစေသောသတ္တိလည်းရှိသည်။ ပိုးကိုသေစေနိုင်သောသတ္တိလည်းထိုက်သင့်သလောက်ရှိပါသည်။ ချင်းသည်အပူဖြစ်သဖြင့် ကပ်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအာနိသင်ပြပါသည်။ တစ်နာရီခန့်ကပ်ထားပါ။ အများဆုံးအလွန်ဆုံး ၂နာရီထကာပို၍မကပ်သင့်ပါ။ တန်ဆေးလွန်ဘေးဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ် […]
September 13, 2019 Thuta Star 0
သေခါနီး ဖြစ် တဲ့ စိတ် အချိန် (၂ )မိနှစ် သာပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ။ သေခါနီး ဖြစ် တဲ့ စိတ်ဟာ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ် ။ လားရာ သုဂတိ ကို ချက်ချင်း အကျိုးပေး နိုင်ပါတယ် ။ ဒီအကြောင်း တရား […]
အခုလူဖြစ်နေတဲ့သူ အားလုံး လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၆၀၀ ခန့်က ဘဝ တခုမှာ အတူတူဆုံဖူးခဲ့ကြတယ်
အခုလူဖြစ်နေတဲ့သူ အားလုံး လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၆၀၀ ခန့်က ဘဝ တခုမှာ အတူတူဆုံဖူးခဲ့ကြတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ သာသနာနှစ် ၂၆၀၀ ခန့် က ခု လူဖြစ်နေသူအားလုံး ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်မှာ တီထွေးဘဝနဲ့အတူဆုံဖူးကြတယ် ဆိုရင် လက်ခံကြလား?? လက္ခံ မခံ အသာထား […]
“ လူဆိုတာ ကံကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ကုသိုလ်အလုပ် များများလုပ်ထားရမယ် ” အကုသိုလ် ဂြိုဟ်မွှေလာပြီဆိုမှဖြင့် ဘယ်ကုသိုလ် 🙏🙏🙏
” လူဆိုတာ ကံကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ကုသိုလ်အလုပ် များများလုပ်ထားရမယ် “ … အကုသိုလ် ဂြိုဟ်မွှေလာပြီဆိုမှဖြင့် ဘယ်ကုသိုလ်လုပ်ချင်စိတ်မှ မရှိဘူး။ မကောင်းသော ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်တွေ သောင်းကျန်းလာတယ်။ မကောင်းသောစိတ်ကို မွေးမြူလာတတ်တယ်။ ကိုယ်က ဘယ်လိုကောင်းအောင် လုပ်နေပေမဲ့ လူတွေက မကောင်းဘူးလို့သာ ထင်လာတယ်။ ဒါမိမိ […]
သိပ္ပံပညာရှင်​​တွေနဲ့ သု​တေသီ ​တွေဟာ အချစ်​ကိုရှာပြီး ဒိတ်​လုပ်​ကြတဲ့စုံတွဲ​တွေကြားက လျှို့ဝှက်​ချက်​တခုကို ​ဖော်​ထုတ်​ပြသွားခဲ့ပါတယ်​။ ဒီသတင်းကို Tuko သတင်းဝက်​ဘ်​ဆိုက်​က​နေ ​ဖော်​ပြသွားခဲ့တာဖြစ်​ပြီး ApannPyay မှ ဘာသာပြန်ရေးသား တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်​။ Society for Personality and Social Psychology က ပြုလုပ်​ခဲ့တဲ့ ​လေ့လာမှုကဒီလိုပါ။ အမျိုးသမီးများ […]